Arena of Valor: 5v5 Arena Game 1.26.1.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.26.1.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Arena of Valor: 5v5 Arena Game
Arena of Valor: 5v5 Arena Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ခွန်အားအတှေ့အကွုံ Arena, Tencent ဂိမ်းများကဒီဇိုင်းတစ်ခုမော်ကွန်းသစ်ကို 5v5 multiplayer အွန်လိုင်းစစ်တိုက်နယ်ပယ်တွင် (အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်း),
တောတွင်း၌သင်တို့ကို join ဖို့သင့်အသင်းဖော်အပေါ် Call! အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ဂန္ 5v5 တိုက်ခိုက်ရေး၌သင်တို့၏ရန်သူများကိုချေမှုန်း! ပထမဦးဆုံးအသှေးကိုဆွဲပါ, သင့်အဖွဲ့သည်သယ်ဆောင်လျက်, နယ်ပယ်တွင်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်လာ!
- မိုဘိုင်းများအတွက်ပြည့်စုံဂန္ထဝင် 5v5 အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်း, -
တာဝါတိုင်များအကြား Nook နှင့် crannies နှငျ့ပွညျ့စုံတစ်ဦးဂန္သုံးလမ်းသွားနယ်ပယ်တွင်ဖြတ်သန်း။ အဆိုပါဖြီးအတွက်ခြောငျးရန်သူများကိုထွက်သည် Watch နှင့်တောတွင်းအတွက်မြော်လင့်သောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖော်ထုတ်။ အထူးသမိုဘိုင်းအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအလိုလိုထိန်းချုပ်မှုသင်သည်ငြိမ်ဝပ်နှင့်အတူသတ်တက်ယူပြီးရှိသည်နှင့်အဘယ်သူမျှမအချိန်အတွက်သင်တစ်ဦး MVP စေမည်!
- ဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်းများ၏ကြီးထွားလာနံပါတ် -
Explore နှင့် Tank ၏အမျိုးမျိုး, လုပ်ကြံခံရ, မာဂုပညာရှိ, ပံ့ပိုး, စစ်သည်များနှင့် Marksmen အပါအဝင် 40 ကျော်အကြောက်ကင်းသူရဲကောင်းများနှင့်ရေတွက်၏တန်းစီဇယားမှာထား၏။ စစ်တိုက်ရာတွင်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်နှိပ်စက်ဖို့ပြီးပြည့်စုံသောအဖွဲ့သည် Build!
- အ Ultimate အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းအတွေ့အကြုံ -
ပထမဦးစွာသွေး, ကိုနှစ်ချက်သတ်, Triple သတ် ... သင်မှန်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာကိုသိနှင့်ကိုချစ်သမျှသော features တွေ။ 5v5, 3v3, 1v1, သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုစိန်ခေါ်နှငျ့သငျစစ်မှန်သောချန်ပီယံဖြစ်စေမည်ဟုတစ်မူထူးခြားတဲ့ "Hook Wars" က mode ကိုအပါအဝင်လူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်း Modes သာ, discover နှင့်လွှမ်းမိုး!
- မြန်အောင်သွယ် & 10-Minute အကိုက်ညီမှုများ -
တစ်ချက်ချင်းအတွက်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှန်းကျင်ကစားသမားနှင့်အတူရေးအဖွဲ့တက်။ , တော, လမ်းကြောင်းများနှင့်တာဝါတိုင်အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းထွင်းပထမဦးဆုံးအသှေးကိုဆွဲနှင့်ရန်သူ Core ဖျက်ဆီးနှင့်။ ထက်နည်း 10 မိနစ်အတွက်အောင်ပွဲရန်သင့်အဖွဲ့သည်သယ်ဆောင်!
- ပြင်းထန်တဲ့အဖွဲ့စစျပှဲအတွက်သင့်သူငယ်ချင်းများကို Join -
အစာရှောင်ခြင်း-PACE တိုက်ခိုက်ရေးခံစားကြည့်ပါနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကစားသမားတွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖောက်လုပ်။ Real-time စကားသံကိုချက်တင်သုံးပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမိတ်ဆွေများနှင့်အစည်းအရုံးရဲ့ buddy နဲ့အပြန်အလှန်။ ဝန် Share အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မဟာဗျူဟာကျကျတိုက်ခိုက်တယ်။ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိဂ်ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ် Tourney Mode ကိုနှင့်မကြာမီသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူရေးအဖွဲ့တက်။ ခွန်အား Arena သင့်မိုဘိုင်း device များအတွက်အသစ်ကအီလက်ထရောနစ်အားကစားဖြစ်ပါတယ်။
- ဒါဟာယူအဘယ်အရာရှိသလား? ထာဝစဉ် Play မှအခမဲ့ -
ခွန်အား Arena မှာ, အားလုံးကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ပါပဲ။ ကျနော်တို့အများဆုံး riveting နှင့်မျှမျှတတဂိမ်းကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားကြသည်, ဒါကြောင့်သင်စစ်တိုက်ရာဒီရေဖွင့်နှင့်အဘယ်သူမျှမကိစ္စလေးသာမှုဘုန်းအသရေဘို့အတုနိုင်။ အနိုင်ရသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးသောအရေးယူမှုအရေအတွက်!
Facebook မှာ: https://www.facebook.com/ArenaofValor
Youtube ကို: https://www.youtube.com/channel/UCgYkGvtBuY4onYm2Eh61zwQ
Instagram ကို: https://www.instagram.com/arenaofvalor/
Arena of Valor: 5v5 Arena Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Arena of Valor: 5v5 Arena Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Arena of Valor: 5v5 Arena Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Arena of Valor: 5v5 Arena Game အား အခ်က္ျပပါ
bigdownloader စတိုး 32 30.14k
Arena of Valor: 5v5 Arena Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Arena of Valor: 5v5 Arena Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.26.1.2
ထုတ်လုပ်သူ PROXIMA BETA
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://sok.proximabeta.com/privacy.html
File Size: 649.49MB
Release date: 2018-12-13 12:36:47
လက်မှတ် SHA1: C5:9C:D7:D8:25:60:4E:27:ED:1D:76:78:F8:83:F3:93:3A:5E:AD:3A
Arena of Valor: 5v5 Arena Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ